IRazer Blade Stealth neRazer Core V2, okwakamuva kwezokudlala | Izindaba zamagajethi
URazer Blade Stealth noRazer Core V2, owokugcina emidlalweni
Abathandi bemidlalo yevidiyo basenhlanhleni njengoba amadivayisi amasha avela kwenye yezinkampani ezinaka kakhulu umkhakha wezemidlalo emhlabeni wonke asanda kwethulwa: Razer.
Ukubheja okunjalo kubhekisa ku- a uhlelo olusha lweRazer Blade Stealth 2017 (okuhlukile okuthuthukisiwe kwemodeli yangaphambilini) kanye neRazer Core V2, isizukulwane sesibili se-GPU yangaphandle yomkhiqizo.
1 I-Razer Blade Stealth 2017
2 I-Razer Core V2
I-Razer Blade Stealth 2017
El I-Razer Blade Stealth 2017 okuhlukile kwe- isikwele se-quad yemodeli yoqobo ethi, kulokhu, izongena emakethe nge Iprosesa ye-7th Generation Intel Core i8550-XNUMXUn nebhethri impilo yakhe enwetshiwe.
KuRazer Blade Stealth 2017, ehlanganisa isikrini se-intshi engu-13 nekhwalithi I-Quad HD + Ngokuxazululwa kwamaphikseli angama-3200 x 1800, inkampani ifake ifayela le- Iphaneli yesikrini sokuthinta se-IGZO ngombala we-100% sRGB. Le mishini isebenza ngejubane I-Turbo Boost ifinyelela ku-4 GHz okuhambisana ne 16 GB yememori imemori yohlelo olunemizila emibili, inkumbulo, ngokusho kukaRazer, ehloselwe ukusetshenziselwa "ukwenza izinto eziningi ngokweqile."
UMin-Liang Tan, Co-Founder kanye ne-CEO yeRazer, uthe, “Onjiniyela bethu benze into emangalisayo ngeBlade Stealth entsha ngokwandisa amandla amakhulu nokwelula impilo yebhethri. IBlade Stealth entsha ilaptop ephelele kunazo zonke yeWindows ekhonae, futhi ungashiswa ngosizo lweRazer Core V2 ″ entsha.
I-Razer Core V2
El I-Razer Core V2 yiyona isizukulwane sesibili se-GPU yangaphandle yomkhiqizo, idivayisi ekwaziyo ukusebenza kuma-GPU afana nochungechunge lwe-NVIDIA's GeForce 10 nochungechunge lwe-AMD lweRadeon 500 (ngeXConnect). IRazer Core V2 inika amandla i-GPU nge ugesi owakhelwe ngaphakathi ka-500W ngenkathi icubungula ihluzo zelaptop exhunywe ku- I-Thunderbolt i-3 (i-USB-C).
I-Razer Core V2 inesilawuli sayo sangaphakathi esinemigqa ehlukile yehluzo namadivayisi axhunyiwe, amachweba amane e-USB 3.0kanye nokukodwa Imbobo ye-Gigabit Ethernet. Futhi lonke ucingo lwenziwe ngokunemba kwe-CNC aluminium egayiwe.
IRazer Blade Stealth 2017 izotholakala ngokushesha ngentengo engu- $ 1700 ngesitolo esiku-Razer online e-United States, France, Canada, United Kingdom nase-Germany. IRazer Core V2 "izothunyelwa kungekudala" futhi izobiza cishe ama- $ 500, nasesitolo esiku-Razer online.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » URazer Blade Stealth noRazer Core V2, owokugcina emidlalweni
IMicrosoft Surface Book 2, ilaptop eqondile yokulwa neMacBook Pro
ILa Caixa ne-ImaginBank manje sezihambisana ne-Apple Pay